SEKOLY PAUL MINAULT
Lasitra sy tefy Drafitra sy refy
Tena vitsy mpanana no najoronao
Ho entina manefy tanora vaovao
Ho an’ny tanintsika…
Ireo matimatim-bola sy ny mpankafy
Laza, voninahitra, ho ravaky ny vozona,
Satria tsy tefy maika mora mihozongozona
Fa ny hampamololona
Ny tena maha-olona.
K’indreny fa zatovo
Maro no nanovo
Ny tsiron-doharanon’ny maha-malagasy
Tsy mba revorevo mihaingo taratasy
Filazam-pahaizana, fa ny tenin-drazany
Sy ny fahendreny no nataony ho lazany.
Anefa tsy ambàka
Fa nahazo laka
Tena mafy orina
Tsy azon’iza esorina
Ny fitaizam-panahy nentinao nampiavaka
Ireo tanoranao satria sakaizam-bavaka.
Ary raha lazaina
Ny lafiny ara-tsaina…
Ny an’ny hafa ianao, satria tsy nety ritra
Ny vokatry ny tozo nataonao tsy mitsahatara
Hanefenao olona tsy menatra milahatra
Amin’ny an’ny sasany
Na toetra, na ny asany.
Koa tsy mahagaga raha olonao no toky
Nilain’ny firenena… raha olonao no zoky
Nitana tsy hivena
Ny tena fahendrena !
Ny hany faniriako : tratràra zato taona
Mihoatra be dia be ! Hivimbinin-dohataona
Ho an’ny firenena sy lanitra baliaka,
Tsiry vanom-paka ho an’ny tanintsika !
Tsy haharaiki-trosa ny hoavin'ny taranaka
Ny tenin'ny vahiny hasolo Teny Gasy
Fa Fahaleovantena derain'ilay mitazana
Ka iambonian-tenarakofana avonavona
Fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa
Ny Fahaleovantena : tsy endrika sodokan'
Fa hevitry ny maro mitapatapak'ahitra
Hanaja ny an'ny tena ho any avara-patana
Hividianan'olona ho sandam-pisandratana
Niadian'ny razantsika sy namonoany tena,
Sahia ka mijoroa hiady ho an'ny marina
Mankasitraka eram-po, eran-tsaina amam-panahy
anareo niombom-po, niombon-tsaina hanavotra ahy
Fa 'lay foko izay narofy sady vizana no reraka
indro tonga soa aman-tsara sady sitrana tanteraka.
Na ny manana hatao sy hasoavana miavaka
na ireo izay nitondra tao am-pony tamim-bavaka
Dia fisaorana mitovy, na firindra na fingadony
no atolotra azy ireo nosoniavin'ilay Radony.
Enga ho toetrantsika ka hitondra fiadanana
"Raha maratra izany vava, miainga hisafo eo ny tanana"
"Raha maratra koa ny tanana, io ny mitsoka eo ny vava"
Na samy hafa toerana aza: mifanampy lalandava.
Raha mbola ao Ianao
Ka manana ny hasinao
Ary ho teninay ...
Ry teninay tsy foana 'zahay !
Tany andrandraina Ianao
Amin'izao tontolo izao.
Tsy firy no fiteny ambara
Ho tahaka anao ka mana-jara.
Tena endrikay tokoa,
Mamy imolotra sy am-po
Mahalaza ny holazaina.
Efa folaky ny Razana
Ho teny tena ahombiazana,
Teny tena manana aina ...
Trano bongo amam-pahitra, an-dohasaha sy an-kavoana.
Làlana misava antsoro ary vato mikotoana….
Tanimbary maro vala, saham-boanga, tanin’ovy,
Voly mangahazo maitso…Tanindrazana io, tsarovy !
Itariko ihany: habakabaka, hay sady tiana volo.
Tehezam-bohitra mamefy ny ara-maso manontolo.
Tanety, havoana, lohasaha, alaala, renirano…
Mbola tanindrazana io, foko iraisana, hay angano.
Itariko ihany hidadasika…Imerina aman-tany menany,
Am’ireo tanàna marony sy ‘zay rehetra hoe harenany…
Mbola tanindrazana ihany, ary azo ireharehana.
Ho valàko ranomasina…Indro Madagasikara,
Dia ny fokony rehetra…tany mamy, tany tsara,
Voatsodrano, tanindrazana, iombonana, iafaràna !
TONTOLO FENO ANAO
Ny ao anaty nofiko
Na any an-tsefaky ny rofiko
Heno foana ianao!
Na an-toerana mangina
Na eny am-pivoriana
Tsaroako foana ianao!
Na toerana ialàko
Na lalana ombako
Dia misy ny alokao!
Izay rehetra alehako
na fotoana hatrehiko
Toa ahitana anao!
Ny marina dia izao
Izao tontolo izao! J. Nalisoa RAVALITERA (22/11/91)
Misy sambo atopan'onja
Tarafin-kintana eny ho eny
Misedra olana mafonja
Tsy misy lay ka dia manjenyNy foko io sambo kely io
Fa norovitinao ny lainy
Fefika izy ankehitrio
Fa nomontsaninao ny ainyIo sambokely trotraka io
Dia hisosa andro aman' alina
Hisedra ny onja sy tadio
Hanadino ... dia ho tafarina !
J. Nalisoa RAVALITERA Boky: Fitia Manadala
Noely ! Noely !
Isa-taona dia injao
Tsianjery no atao
Tonta ve sa vaovao ?Noely ! Noely !
Efa mila tsy ho re
Ilay teny tsotra hoe
Minia mikimpy avokoa izao tontolo izao
Ka ny Noely zary andron’ny manan-katao
Odian-tsy hita ireo mahantra marobe
Izany no Noely ve ?
Mamonjy tavanandro ireo mpihatsara ivelan-tsihy
Ka mody avela kely aloha ny zera baomba ery
Fa rahampitso dia tohizana indray
Ny fomba ratsy hatrizayNoely ! Noely !
Izay tokony hatao
Ho an’ny rahalahinaoFa miofy akondro vava kosa Ireo kamboty ray
Fadiranovana hatrany tsy misy mpandray
Ny maso foana no apitrapitrany eo
Toa miantsoantso hoe “vonjeo”
’Lay famonjena nodradraina hatry ny ela be
Moa azonay mba hantenaina ? Rahoviana re ?
Sa… ny Mpamonjy tsy mba tonga ho anay
Fa tsy mba ondriny izahay ?Noely ! Noely !
Mba meteza ianao handre
Ilay firariana hoe
Tiako ianao ry teniko
ary haiko fa tsy ho neniko
ny milaza izany
ho ren'ny eran-tany
satria taminao i Neniko
no nampianatra ahy hibada
hanonona hoe Dada
satria taminao no henoko
ilay teny tena fy
Tiako ianao ry teniko,
Tiako ka teneniko
Tsy atakaloko hafa
Fa entiko mitafa
ka tsy maintsy teneniko
izay tsy miteny gasy
MALAGASY FOANA IANAO Na ho fotsy fihodirana, fa notsatsoin’ny hatsiaka
Na hiteny teny hafa, noho ny fiampitana riaka
Na hiaina fivoarana, noho izato fandrosoana
Dia Malagasy foana ianao, izany tsy azonao soloinaNa ho vazaha ny taratasy, ka ny anaranao vaovao
Na ho ary fomba be mihitsy , ny kojakojan-tranonao
Na hiadana am-pitaovana, noho ireo karazan’hai-tao
Dia tsarovy foana foana fa mbola Malagasy ianaoNa ho vazaha ny namanao, any am-piasana sy birao
Na ho vazaha ny serasera sy ireo fifandraisanao
Na ho vazaha ny fangatahana ao anaty vavakao
Dia tadidio fa Malagasy ny ra mikoriana anatinaoKoa ho anao Ramalagasy, izay nandao ny firenena
Izay rehetra mila ravin’ahitra, noho ny adidy izay nekena
Dia tsotra ny hafatra sy teny, ampitaina sy zaraina
Malagasy foana ianao, raha mbola velona sy miaina
ZARAO ETO Zarao eto ny alahelo nokotrehim-po voadona
Zarao eto ny hadisoana rehefa iny ianao nifona
Zarao eto ny hatezerana, sy ireo otri-balifaty
Dia hihamaivana ianao, raha mivoaka ireo tsy tantyZarao eto ny hafaliana, mampitsiky izany tava
Zarao eto ilay fitia, mampisioka izany vava
Zarao eto izany vetso sy embonembona fitia
Dia ho faly ny tontolo, ka an-tsiky no miriaZarao eto ny hetaheta, ao anatinao mangina
Zarao eto izany nofy, sy hasambarana ho zina
Zarao eto ireo kinasa, novetsoina hotanteraka
Dia hisinda avokoa ireo asa saina izay mandrerakaZarao eto ireo fijery, sy fahitanao ny tontolo,
Zarao eto na dia hevitra, heverinao fa hoe bontolo
Zarao eto ny fisaina, fibanjinanao ny ho avy
Dia hivadika traik’efa, lesona ho an’ny mpianakavyZarao eto ireo kanto, nataonao tsiambararoa
Zarao eto ireo talenta, ho soratra sy masoivoho
Zarao eto ireo fahaizana, izay harenanao miafina
Mba ho kanto malagasy, irin’ny sasany ho tahafina
ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU COLLEGE PAUL MINAULT EN FRANCE: PATA
Ny niforonan'ny fikambanan'ny maintimolaly PATA aty Frantsa
Ny tranonkala www.wanadoo.mg (nodimbiasan’ny www.moov.mg taty aoriana) no sehatra voalohany nihaonan’ny maintimolalin’ny sekoly Paul Minault monina aty ivelan’i Madagasikara, sekoly izay manana ny lazany tokoa ao Antananarivo ao ary fantatra ihany koa amin’ny anaram-bositra hoe Pata. Taona 2004 tamin’izay. Maintimolaly iray no nitady ny mpiara-mianatra aminy fahiny tao amin’ny sehatra natokana ho an’ny fikarohana olona (rubrique avis de recherche). Nisy ny nanoina avy eto Frantsa, avy any Kanadà, Madagasikara..., saingy ny tsy mpiara-mianatra taminy no be niditra an-tsehatra, te hiresaka fotsiny izao mikasika ny sekoly sy ny fiainana tao. Betsaka ny nanjary nifankahazo, na dia tsy nifankahita endrika akory aza. Nafana dia nafana ny tafa satria nahatratra an’arivony ny taratasy nifamalian’ny samy Pata tao. Mbola misy io sehatra io hatramin’izao ao amin’ny www.moov.mg, saingy nihena izaitsizy ny isan’ny taratasy ao, rehefa voafafa ireo rehetra teo aloha nony niova ho www.moov.mg ny tranonkala (jereo ny sehatra “Communauté”).
Naniry ny hifanatri-tava àry ireo maintimolaly Pata mpisera tao amin’ny tranonkala taloha. Tapaka fa amin’ny fihaonam-panatanjahantena malagasy 2005 (“Rencontre nationale sportive” na RNS) any Vichy no tsara hihaonana. Azo isaina amin’ny rantsan-tanana anefa ny tonga nanatrika io fivoriana io. Tapaka teo fa hanentana ny maintimolaly monina aty ivelany ny tsirairay mba hiara-midinika izay azo atao mikasika ny Sekoly, narofy tamin’izany fotoana izany. Jolay 2005 : io no tena fihaonamben’ny maintimolaly Pata voalohany taty Frantsa, ka tany Montpellier no nanaovana azy. Maro ny tonga, nafana dia nafana ny fihaonana. Nisy valandresaka telo nialoha ny dinika : ny voalohany mikasika ny misionera Paul Minault, ny faharoa momba ny tantaran’ny Sekoly ary ny fahatelo namelabelatra ny olana mahazo ny Sekoly tamin’izany fotoana izany. Teo no tapaka ny hevitra hanangana fikambanana ― voarakitra ao amin’ny gazetim-panjakana frantsay ny fisiany (lalàna 1901) ―. Raikitra ihany koa fa hisy fihaonambe isa-taona, ka hiovaova ny toerana : Les Gets (Haute-Savoie, 6 sy 7 mey 2006), Saint-Martin-en-Haut (akaikin’i Lyon, 19 sy 20 mey 2007) ; noho ny antony tsy azo nanoarana, tsy nisy fihaonambe ny taona 2008 ; indroa nisesy (2009 sy 2010) tao amin’ny saham-pialam-boly iray ao Cergy-Pontoise (faritr’i Parisy). Ny fihaonambe manaraka dia any Dijon (9-10 jolay 2011).
Tsy ny latsakemboky ny tsirairay isa-taona, hany fidiram-bolan’ny fikambanana, velively aloha hatramin’izao no hahazoany manampy ny sekoly, fa ny fahafoizan-tenan’ny mpikambana, ny fiaraha-misalahy tsy amam-bola ary ny fikarohana fiaraha-miasa amin’ny orinasa aty am-pitan-dranomasina aty.
Mifandray amin’ny fikambanan’ny maintimolaly any an-tanindrazana ny aty Frantsa fa tsy mahaleotena tsy akory. Vao niforona ny fikambanana dia nanana tranonkala ary eo an-dalam-panaovaozana azy ny Birao amin’izao fotoana : www.paul-minault.com. Iarahan’ny any an-tanindrazana sy ny aty Frantsa mitantana izy io. Miara-mankalaza ny faha-110 taona ihany koa ny andaniny sy ny ankilany ary tsy mitsaha-mifampita vaovao ao amin’ny “Facebook Groupe PATA” aloha (misy mpikambana 340 hatramin’izao andro anoratanay izao, 16 mey 2011), mandra-pahavoavoatra tsara ny tranonkala.
« Ry Pata mamiko ... ... / raha manadino anao aho / aoka ho neniko / ‘lay loharanom-pahendrena / ‘zay notovoziko ... ... » : ireo ny andalana voalohandohan’ny hira fanevan’ny Sekoly tsiahivin’ny maintimolaly isaka izay mihaona ry zareo.
Mala - 17/05/2011
ANDRIANTSITOHAINA Jaona (01/03/2012)
Responsabilité au sein de l’Association
ANDRIATSIMA RAVELO Heriniaina
RABEHARISOA Rakaloanjanahary Fitiavana Antraniavo
RANAIVOHARISOA Voahangy Harilala
Collège/Lycée Le Gymnase Jean Sturm